Garsoorka iyo halgankii dheeraa ee loo galay difaaca dastuurka Kenya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Garsoorka iyo halgankii dheeraa ee loo galay difaaca dastuurka Kenya
Garsoorka iyo halgankii dheeraa ee loo galay difaaca dastuurka Kenya
Khilaaf cirka isku sii shareeraya oo u dhexeeya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo garsoorka dalka, oo salka ku haya sareynta dastuurka ayaa mar kale banaanka u soo baxay. Markan dagaalka waxaa soo dadajiyay isku daygii madaxweynaha ee ahaa inuu la wareego awooda guddiga adeegga garsoorka (JSC) si uu u soo xulo garsoorayaasha iyo saraakiisha garsoorka ee maxkamadaha dalka.
Muddo labo sano ah, isagoo sheeganaya in uu helay xog sir ah oo ka dhan ah iyaga, Kenyatta wuxuu diiday inuu si rasmi ah u magacaabo 41 shaqsi oo ay soo xusheen JSC si ay u buuxiyaan jagooyin kala duwan oo ay ku jirto Maxkamadda Racfaanka. Tani waxay ka soo horjeedaa dastuurka, waayo isagu awood uma laha arrinta, waxaa iyana jira xukunno badan oo maxkamadeed oo arimahaa ku lamaansan. Hayeeshee toddobaadkan, qayb ahaan wuu u hoggaansamay, isaga oo magacaabay 34 iyaga ka mid ah, laakiin si xamaasad leh ayuu u sii waday xayiraadda lix kale (oo midkood ahaa ku meel gaadh dhintay).
Mowqifkiisa waxaa si wada jir ah u cambaareeyay ururada bulshada rayidka ah, baarlamaanka iyo xitaa gudoomiyihii hore ee maxkamada sare, Willy Mutunga, oo qalinka ku duugay warqad kulul oo ku eedeyneysa Kenyatta inuu yahay “mid ku suntan xushmad la’aanta wax qabad ee awooda” uuna khiyaanay dhaartiisii rasmiga ahayd. Laakiin tani ma ahan markii ugu horreysay ee Kenyatta uu madaxa ka garaaco garsoorka, gaar ahaan tan iyo markii lagu dhawaaqay dastuurka 11 sano ka hor, markaa oo ahayd markii ay dalbanayaan in sharciga loo hoggaansamo dabaqadaha siyaasadeed.
Inta badan taariikhda Kenya, madax-bannaanida garsoorku waxay ahayd sheeko-xariir. Xilliyadii gumeystaha, garsoorayaashu waxay ku shaqeyn jireen raalli ahaanshaha taajkii gumaysiga oo xorriyad ma helin. Siduu Mutunga u sheegay 2013, waxay asal ahaan ahaayeen “shaqaale dawladeed, waxay u adeegi jireen maamulkii gumaystaha kumana ay dhici karin inay ka horyimaadaan”.
In kasta oo markii xorriyadda la qaatay 1963, dastuurku wuu ilaaliyay garsoorayaasha, isagoo si ula kac ah uga mamnuucay awoodda fulinta, haddana wuxuu caddeeyay inaanay jirin wax u dhigma caadooyinka hiddaha u ah u hoggaansamidda xukun ee ku-xadgudubka fulinta ee laga soo dhaxlay gumeysiga.
47-da sano ee tegay, marka laga reebo inyar oo xusid mudan, maxkamaduhu may aamusnayn oo keliya, laakiin waxay umuuqdeen kuwa doonaya inay gacansaar la yeeshaan madaxweynayaashii is xigxigay waxayna burburiyeen dhammaan ilaalintii iyo xakameyntii dastuurka ugu qorayd. Garsoorku wuxuu noqday wax aan ka badnayn waax ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha guud, iyada oo si aad ah loo yareeyay isla markaana laga dhigay shaqaale caadi ah.
Waxaa jirey hal kiis oo caan ahaa 1989, kaasoo garsooruhu ku dhawaaqay in sharciga oo dhan aan la fulin karin lana fulin karin, asal ahaan wuxuu ka xayuubiyay dhamaan Kenyanka xuquuqdoodii dastuuriga ahayd, sababtoo ah gudoomiyaha maxkamada sare wuxuu ku guuldareystay inuu dejiyo qawaaniinta ay fulinayso maxkamada sare.
Waxaa laga yaabaa meesha ugu hooseysay ee garsoorku gaadhay in ay ahaydo intii lagu gudajiray murankii doorashadii madaxtinimada ee 2007, markaa oo ay mucaaradku muujiyeen kalsooni darada ay ku qabaan garsoorka ayna arimihii banaanka iyo dadka u soo saareen, taas oo keentay dhimashada in ka badan 1300 oo qof, & barakac kumanaan iyo boqolaal ah. Iyo dalka oo burburka ku dhowaaday. Rabshadaha ka dib, isbedeldoonku wuxuu mudnaanta koowaad siinayay garsoor madax-banaan in la helo, waayo waxay usoo halgameen in ka badan 25 sano dib u habeynta dastuurka iyo garsoorka.
Siyaabo badan, dastuurkii 2010 wuxuu ahaa dib habayn wax ka beddeshay habdhaqankii xumaa ee dabaqadda siyaasadeed ay kula dhaqantay dadka Kenya. Dastuurkii loo hanwaynaa oo laga filayey madaxbanaanidu wuu fashilmay maxaa yeelay waxaa soo qoray Ingiriiska, dabaqadda siyaasadeed ee dhaxashayna ma aaminsanayn garsoor madax banaan, markaa ku dhowaad qarni wuxuu ahaa cadaadis gumaysi, waxaana yaraa hay’adihii jiri lahaa ee difaaci lahaa.
Taas bedelkeeda, dastuurkii 2010 wuxuu ahaa mid ka dhashay tobanaan sano oo halgan maxalli ah, wadatashi qaran oo ballaadhan wuxuuna lahaa xoogag u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah, garyaqaanno iyo Kenyan caadi ah oo doonaya inay u istaagaan. Tan ugu muhiimsan, waxay ahayd in laga xoreeyo silsiladaha isku taxan ee fulinta, markaa garsoorku wuxuu si dhakhso leh u kobcin lahaa laf-dhabarna u noqon lahaa in la adkeeyo hirgelinta xukunka dastuuri ah.
in kastoo. Fasiraadaha garsoorka qaarkood dastuurka ugu jireen kuwo dib udhac ku keenaya dastuurka. Go’aanadii 2013 ee asal ahaan sheegay in sharciga la horgaynayo dadka lagu eedeeyay dambiyada ka dhanka ah aadanaha ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyadu soo saarto magacyadoodu aytahay in la caddeeyo ka hor intaanay u tartamin xafiiska ugu sarreeya dalka, intaas ka dibna waxay taageertay doorashadii shakiga lahayd ee Madaxweyne Kenyatta iyo ku xigeenkiisa, William Ruto taasoo cabsi geliysay dad badan oo reer Kenya ah in mustaqbalka uu noqon karo dib u dhac hor leh.
Maxkamaduhu sidoo kale waxay si indho la’aan ah u taageereen adeegsiga dhaqamada gumeystaha ee ka dhanka ahaa qiyamka wanaagsan ee galmada, iyagoo si aan gabasho lahayn u taageeray galmada qaniisiinta iyo guurka isku jinsiga ah, iyadoo dastuurku mamnuucay xiriirka labada jinsi.
Si kastaba ha noqotee, marka laga hadlayo, garsoorka wuxuu umuuqdaa inuu helay xoogaa raad ah oo uu kasbaday kalsooni shacabka Kenyaanka ah isagoo, marar badan, laalay sharciyo jabiyay dastuurka.
Shaki la’aan, barta ugu sareysay waxay ahayd baabi’intii doorashadii madaxtinimada 2017 sanadkaas, waxayna ahayd wax aan horey loo maleyn karin. Inkastoo ay la kulantay hanjabaado ba’an oo uga imanayay Kenyatta. laba bilood ka dib, ayay ahayd markii weerar lagu qaaday ku xigeenka madaxa cadaalada, maxkamada sarena ma haysan kooram ay ku dhegaysato dacwad ka dhan ah qabashada doorashada ku celiska ah. Hayeeshee burintaa ayaa la xaddiday.
In kasta oo uu “ku guulaystay” muddadiisii labaad, Kenyatta wuxuu sii waday dagaalka uu kula jiro garsoorka iyo dastuurka, isaga oo la kaashanaya murashaxii la tartamayay, Raila Odinga, si loo bilaabo Hindise hor leh oo lagaga gudbayo awooda garsoorka ee isasoo taraysa saacaddana dib loogu celiyo halkeedii iyadoo wax laga beddelayo. dastuurka si loo bilaabo dib u soo nooleynta fulin awood leh oo dhan. Hindisahan ayaa keenay biil soo saaray dhowr isbeddel oo dastuuri ah.
Sidii 1960-yadii, maanta sharci-dejintu waxay u shaqaynaysaa si wax ku ool ah iyada oo hubinaysa fulinta waxayse ku fashilanatay in la joojiyo soo jeedintaa. Bishii Maajo, xukun kale oo taariikhi ah, Maxkamadda Sare waxay ku dhawaaqday in shirkadduhu yihiin kuwo aan dastuurka waafaqsanayn.
Go’aanka ah dib u cusbooneysiinta taariikhdaa a murugada leh ee ah sida loo madanjo xaabin lahaa madax-bannaanida dastuurka iyadoo la adeegsanayo hannaan wax-ka-beddel, ayna tahay in dadka reer Kenya ka dagaallamaan in laga takhaluso garsoorkaa madaxa-banaan, garsoorayaashu waxay qabaan in fara-gelin lagu sameeyo qaab-dhismeedka aasaasiga ah ee dastuurka aanay sameyn karaan oo keliya golaha sharci dejintu balse ay tahay in ay ka qayb qaatay dhamaan dadka reer Kenya qoritaanka mid cusub.
Mar labaad, diidmada garsoorayaashu wuxuu keenay xanaaq iyo niyad jab ka yimid Kenyatta iyo saaxiibbadiis waxayna soo dedejiyeen ficillo ciqaab ah. Laba ka mid ah garsoorayaasha uu is hor taagay in ay ka hawlgalaan Maxkamadda Racfaanku waxay ka mid ahaayeen shan garsoore oo xukunkaa wax ka riday.
Khudbad uu jeediyey bilowgii bishii Juun ayuu madaxweynuhu ku cadeeyay in ujeedada xuquuqul insaanka iyo ismaamulka ay tahay wada shaqeynta dowlada iyo in madaxbanaanida garsoorka ay khatar ku tahay isla dastuurkii siiyay madax banaanida.
Maaddaama garsoorku hadda isu diyaarinayo inuu dhageysto rafcaanka ay dowladdu ka qaadatay xukunkii dhammaadkii Juun, su’aashu weli waxay tahay in garsoorayaasha mar kale lagu cadaadin doono inay u hoggaansamaan rabitaanka fulinta iyo haddii ay la imaan doonaan geesinimo ay ku sii wadaan difaaca dastuurka iyo madaxbanaanidooda. Kenyanka waxaa looga baahanyahayn feejignaan dheeri ah, iyagoo la rajeynayo isku dayo dambe.
Aragtida lagu muujiyey qodobkaan waa mid u gaar ah qoraaga mana aha mid ka tarjumaysa mowqifka tifaftirka ee Aljazeera & Turjumida Walwaal.com.
La-taliye isgaadhsiinta, qoraa, iyo kartooniste siyaasadeed oo abaalmarin ku guuleystay oo deggan Nairobi.
Translate By: H.M.Dhiillood
Previous articleThe judiciary and the long fight to defend Kenya’s constitution